शाहिदको 'कबीर सिंह' प्रति किन... :: एजेन्सी :: Setopati
शाहिदको 'कबीर सिंह' प्रति किन आक्रोशित बनिन् यी बलिउड गायिका?
एजेन्सी मुम्बई, असार ८
शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको शाहिद कपुर अभिनित 'कबीर सिंह'लाई लिएर दर्शकहरूले भिन्न भिन्न राय दिएका छन्।
कतिले सिनेमालाई राम्रो भनेका छन भने केहिले मननपरेको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्।
दर्शकबाट यस्ता प्रतिक्रिया आइरहँदा 'कबीर सिंह' शाहिदको करियरकै सर्वाधिक सुरूवाती व्यापार गर्ने सिनेमा बनेको छ। सिनेमाले रिलिजको दिनमा २०.२१ करोड भारूको कमाइ गरेको छ।
सिनेमाले यस्तो कमाइ गरिरहँदा बलिउड गायिका सोना महापात्रा भने सिनेमालाई लिएर आक्रोशित देखिएकी छिन्।
सिनेमामा शाहिदले गरेको भूमिकाका कारण उनी आक्रोशित बनेकी हुन्।
उनले भारतको राष्ट्रिय महिला आयोगकी रेखा शर्मालाई ट्याग गर्दै सिनेमाप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेकी छिन्।
'कसैले महिलाविरोधी पित्तृसत्तात्मक कथालाई ख्याल गरेन? मात्र गम्भीर अभिनय? वास्तवमा यो अन्तस्करणसम्म हैरान गर्ने किसिमको छ। तपाई त राष्ट्रिय महिला कमिसनको अध्यक्ष हो। म भारतमा महिलाकोस्थितिको कुरा आउँदा के आशा राख्ने भनेर हैरान हुनेगर्छु?', ट्विटमा उनले लेखेकी छन्।
यसैगरी त्यसपछि गरेको अर्को ट्वीटमा पनि उनले आफ्नो रोश प्रकट गरेकी छन्।
उनले सिनेमाको पक्षमा टिप्पणी गरिएको एक ट्वीटलाई ट्याग गर्दै 'अभिनेतासँग रोल छनौट गर्ने अलावा अर्को कुने जिम्मेवारी हुँदैन?' भनेर प्रश्न गरेकी छन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार ८, २०७६, ११:१६:००